Loharano inona izany? Fitaovana 3 hamantarana endri-tsoratra amin'ny Internet | Famoronana an-tserasera
Azo antoka fa mihoatra ny indray mandeha ianao no nitety Internet ary nahita afisy, pejin-tranonkala, fonosana na zavatra nahasarika ny saina noho ilay endritsoratra ampiasain'ny mpamorona azy. Ary nanontany tena ianao hoe inona ny loharano hahazoana izany.
Angamba io zavatra io ihany no nitranga taminao teny an-dalambe, izay nahitanao zavatra izay heverinao fa mety ho an'io tetik'asa nijanonanao io, na ny fanananao izany ao amin'ny repertoire-nao loharano satria azo ampiasaina betsaka. Fa, Ahoana ny fomba hamantarana ny endritsoratra amin'ny Internet sy hahalalanao inona ny karazana endritsoratra? Aza manahy fa anio dia miresaka an'io isika.
1 Karazan-tsoratra: izao tontolo izao mora fantatra kokoa
2 Fitaovana hamantarana endritsoratra amin'ny Internet
2.1 Inona ilay endritsoratra
2.2 Fitaovana WhatFont
2.4 VOLA: Printworks Bowfin
3 Manana ny loharano aho, inona izao?
Karazan-tsoratra: izao tontolo izao mora fantatra kokoa
Taona vitsivitsy lasa izay, rehefa nanomboka nitombo ny endritsoratra, amin'ny ankapobeny dia noho ny mpamorona maro izay nanolotra ny zavatra noforonin'izy ireo ho an'ny mpampiasa, na maimaim-poana na andoavam-bola, ny isan'ny endritsoratra efa nampitomboinay, avo telo heny ary maro hafa koa mandraka ankehitriny dia an'hetsiny amin'ny loharano samihafa.
Noho izany, rehefa mahita iray amin'ny endrika izy (afisy, sora-baventy, fonony ...) dia tsy azontsika fantarina tsara, eny fa na ireo matihanina miasa amina endritsoratra isan'andro aza, inona izany endritsoratra izany. Tena sarotra izany.
Talohan'izay dia tsy nisy fitaovana hafa ankoatry ny manoratra amin'ilay tranonkala misy ilay dokambarotra ary mangataka aminy am-panajana mba hampifandray anao amin'ny mpamorona. hanontany azy hoe inona ny endri-tsoratra nampiasainy. Saingy ankehitriny dia niova ny zava-drehetra ary misy fitaovana maro izay afaka manampy anao hamantatra hoe inona ilay endritsoratra ary milaza aminao aza hoe aiza no hampidinana azy.
Fitaovana hamantarana endritsoratra amin'ny Internet
Azo antoka izao fa manontany tena ianao hoe inona ireo fitaovana azonao ampiasaina hahitanao hoe loharano inona no mahaliana anao ary tsy hitanao na aiza na aiza, sa tsy izany? Izahay dia tsy mampiandry anao intsony. Ireto no tena atolotray anay indrindra:
Inona ilay endritsoratra
Ity dia iray amin'ireo malaza indrindra sy ankafizin'ny maro satria tsy vitan'ny hoe mamantatra typografia an-tserasera fotsiny izy io; fa afaka manao toy izany koa ianao amin'ilay hitanao ivelan'ny Internet, izany hoe eny an-dalambe, amin'ny magazine ara-batana, afisy ... Ny hany ilainao dia ny maka sary akaiky araka izay azo atao ny taratasy sy ny kalitao. mampakatra azy.
Amin'ny ankamaroan'ny fotoana hangataka anao hamantatra litera vitsivitsy izy, mba tsy hisy olana ary amin'ny farany hanome anao lisitr'ireo endritsoratra mety hampiasaina io. Ny dingana farany dia azonao atao ny misafidy izay mitovy indrindra (ary ambonin'izany rehetra izany dia jereo raha voaloa na tsia, raha azonao ampiasaina amin'ny fampiasana ara-barotra na tsia ...).
Lafiny iray hafa tsara amin'ity fitaovana ity ny fananana tahiry be dia be, noho izany mora kokoa aminao ny mahita hoe inona ny loharano eto fa tsy amin'ny fitaovana hafa.
Sady fampiharana no tranokala (WhatFont). Nifantoka tamin'ny rindranasan-tranonkala izahay satria, raha misintona azy ianao ary mametraka azy ao anaty tranokala dia tsy mila mankany amin'ny tranonkala ianao hahafantarana hoe inona ny loharano, fa Izy io dia "hilaza" anao avy amin'ny tranokalanao manokana amin'ny fotoana itetezanao ny pejy misy anao.
Mora ampiasaina izy io ary, toy ny teo aloha, dia manana fototra tsara ihany koa.
Fitaovana iray hafa azonao ampiasaina hizaha ny endritsoratra izay mampifoha anao hatrany dia ireo My Fonts. Tranonkala iray fantatra kokoa ny misintona endritsoratra noho ny mamantatra azy ireo, fa raha ny tena izy dia azo atao izany.
Mba hanaovana izany dia ampiasao ny rafitra mitovy amin'ilay safidy voalohany nomenay anao, izany hoe tsy maintsy maka sary avy amin'io loharano io ianao ary mampakatra azy any amin'ny mpizara ananany. Hodinihiny izany ary hanome anao lisitry ny loharano izay tena mitovy, na mitovy mihitsy aza, sady karama no maimaim-poana, mba hahazoanao azy ireo. Amin'ny tranga maro, Ho marina 100% izany, fa amin'ny hafa dia loharano "manokana" kokoa izy ireo, na dia mety hanana izany aza ianao.
VOLA: Printworks Bowfin
Raha afaka mandany fotoana bebe kokoa amin'ny famantarana ny typeface ianao, ary tena mila iray manome anao 100%, na akaiky araka izay azo atao, ny typeface nampiasain'izy ireo, dia ity no fitaovanao.
Izy io dia matihanina kokoa, ary noho izany dia sarotra kokoa ny mampiasa azy satria hanontany anao amin'ny antsipiriany marobe momba ilay loharano izy io, tsy ny zava-misy fotsiny ny mampakatra ny sary sy milaza aminao hoe inona izany loharano izany. Eto izy dia hitaky anao hilaza aminy hoe manao ahoana ny litera tsirairay, ny miolakolaka, miroborobo ary ny antsipiriany hafa izay ny matihanina ihany no afaka mamantatra ireo taratasy ireo.
Fa izany no antony anoloranay hevitra azy io, satria izy io dia manam-pahaizana manokana kokoa izay misy fampahalalana marobe sy fitaovana fanampiny ho hitanao, na inona na inona vidiny, ny karazana endri-tsoratra izay "nanjary tia" taminao.
Manana ny loharano aho, inona izao?
Raha misy amin'ireo fitaovana navelanay nampiasainay taminao, tsara izany, fa raha vao hitanao hoe loharano inona izany, Tsy maintsy tadidinao fa afaka mahita vinavina maromaro ianao. Anisan'ireny ny:
Maimaimpoana ny endritsoratra izay nofantarinao, izany hoe azonao ampiasaina izany ary tsy manana olana amin'ny fampiasana azy ho ara-barotra na ho anao manokana. Tsy izany matetika, fa mety hitranga.
Maimaimpoana ny endritsoratra, fa tsy hampiasaina amin'ny varotra. Midika izany fa azonao ampiasaina amin'ny sehatra manokana, fa tsy ara-barotra, raha tsy mifandray amin'ny mpamorona azy ianao ary mangataka alalana na mandoa azy hampiasa an'io fomba io.
Karazan-tsoratra fandoavana. Safidy hafa io, fa ilay typeface tianao be dia be dia taratasy iray izay tsy maintsy aloanao hampiasa azy io. Aza matahotra anefa, tsy midika foana izany hoe handany vola be; fa be ny vidiny. Noho izany, azonao atao ny manana hatramin'ny mora ka hatramin'ny hafa, avy eo eny, hahatonga anao hisafidy loharano mitovy amin'izany izy ireo.
Na eo aza ny zava-drehetra, ho an'ny mpamorona na ho an'izay miasa miaraka amina endritsoratra dia zava-dehibe tokoa ny fananana isan-karazany amin'izy ireo, ary ireo fitaovana ireo dia afaka manampy anao hamantatra sy hamantatra ireo endritsoratra hitanao fa mahasoa.
Fantatrao ve ireo fitaovana famaritana endri-tsoratra bebe kokoa hahafantarana hoe endri-tsoratra inona izy? Azonao lazaina aminay ve ny iray amin'izy ireo?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Cheats » Loharano inona izany? Fitaovana 3 hamantarana endritsoratra amin'ny Internet
Oscar Rodriguez dia hoy izy:
Tena tsara, misaotra anao nilako izany.
Valiny tamin'i Oscar Rodriguez